Umhla My Pet » 5 Mal Winter Umhla Ideas
ukubuyekezwa: Oct. 14 2020 | 2 min ukufunda
HBT ixesha Yomelelani leeholide, ebusika fun nokuchitha ixesha kunye nezalamane. Ukuba umfundi onjengam, ozabalazela ukufikelela uthenga iphepha yangasese, ke wena ufuna imihla ebusika ukuba zombini mnandi yaye akayi kuyaphula kwiwalethi. Wena kwi thamsanqa. Ezi umhla izimvo ezintlanu akubizi kwaye iyamvuyisa ubudlelwane yakho le holide.
1. Yenza indlu Gingerbread kunye
Abazonwabisa izinyo lakho limnandi, yaye iintlantsi zinyuka ukubaleka kunye ukwakhiwa indlu Gingerbread. Ndandinexhala yokuswela kwenu iitalente zobunjineli? Ukuvutha hayi ngaphezulu, kukho ezi khithi Gingerbread olukhulu eziquka zonke izixhobo kufuneka, kwaye kuxwebhu kulula ukufunda (abaninzi kubo kuquka imifanekiso). Ezixabisa ngaphantsi kwama $20, kwekhithi ziyafumaneka kwiivenkile ezininzi, iivenkile zobugcisa, kwaye online. Beka kwezinye tunes leeholide kwaye nokwakha! Isigaba sesibini fabulous lokuhlanganisana ongengowale ndalo ezityiwayo nto beqhekeza yaye liqwenga kunye. Ngokuqinisekileyo isithembiso yokutya kakhulu kunye nexesha elimnandi.
2. Itshokolethi eshushu, cuddles kunye imovie iholide
Nto yodlula abandayo othululwayo shushu angathabatheki lomlilo wothando. Hayike mhlawumbi kakhulu kakhulu. Ndibhekisela kwinto yokuba cuddling nomntu wakho ezizodwa unandipha indebe itshokolethi eshushu bunokuzifudumeza umphakathi zakho kwimozulu zasebusika ebandayo. Yongeza kwi film iholide classic ezifana Elf, Yinto Ubomi nguMmangaliso, Ekhaya ndodwa, Indlela Grinch wayiba iKrismesi okanye Ibali iKrismesi kwaye kuyiloo umhla ebusuku ekugqibeleni. Iindleko kancinane kakhulu, unokonga imali xa besiba uqina ngexesha umgangatho sinokusondela kwesigulana.
3. Yiya ngumoya litha ukubona zonke izibane amahle
zokuhombisa lemibhiyozo ziyinxalenye yintoni eyenza ukuba ubusika intle kangaka. Akukhathaliseki ukuba bahlala phi, kukho kusenokwenzeka ukuba indlu emva endlwini, esitratweni emva kwisitrato izibane, kwezihombo, nezidanga nezinto zonke ngovuyo. Linda kude kuhlwe yaye emva koko ndandibethwa yiPort walk okanye ebumelwaneni bakho abone ngokujonga izibane leeholide ethandekayo kunye nezinto nokuhombisa (ukubona ukuba zingaphi ezo amalungiselelo ezinkulu ezisemajukujukwini unako ukufumana). Unako ukwenza ube umdlalo ngokuvotela apho indlu kucwangciso leeholide eyona. iindleko nto, lo mhla ezilula lula likhanyise ulwalamano lwakho.
4. kaJona, ikhephu
Wasebenzise kwengubo ikhephu kwaye zibophe kunye wakho omthandayo abathile kaJona, ngaphandle enkulu ngaphandle. Yiya cross kuskiya lizwe, ukunyuka okanye ikhephu neempumpha kwi park lengingqi yakho okanye ezityhutyhayo. Nandipha luphaphazela phantsi iinduli reliving ebuntwaneni wakho ngemini tobogganing. Ukwakha Kubikula kunye okanye yokubonisela okanye ndiye ngebhokisi kwiziko ice werinki yangaphandle. Iindleko kancinane kakhulu, kwindalo kuba ngomnye kumabala ilungileyo ubuhlobo nampumelelo.
5. yobugcisa DIY
I-Internet yenza ezininzi ivideo iingcamango yobugcisa iholide DIY kunye nemiyalelo. Khetha isibini umdla kwaye intloko phezu kwistora wezandla okanye usebenzise izixhobo nawe naphi indlu uze ndinobuqhetseba! Ukuba zange neemuvi Ubugcisa nobuChule kwakhona kwisikolo sikarhulumente, khumbula nje ukuba kusoloko elungileyo ukuzama into entsha, kwaye phumani ongaqhelananga. Ngaphandle uya kuba iqabane lakho ulwaphulo ukukunceda ngaphandle.
Ezi umhla izimvo ezintlanu akubizi, okwakusiza novoto lixesha elihle lokuba wena kwesigulana ngeli xesha ebusika. Nandipha leholide kwaye bonwabele ulwalamano lwakho.